Forum serasera malagasy PASKA Jiosy, Misy diso fandray - Dinika forum.serasera.org
PASKA Jiosy, Misy diso fandray
Fitohizan'ny hafatra : PASKA Jiosy, Misy diso fandray
randyrandy - 09/05/2021 04:06
Nisy lohahevitra iray izay efa nandeha teto hoe: TELO ANDRO SY TELO ALINA. Rehefa manaraka tsara io ady hevitra io anefa aho dia hitako fa miorina amin'ny tsy fahazoana tsara ny fankalazana Paska Jiosy tamin'ny andron'i Jesosy no olana ao.
Miangavy izay rehetra manohana ny "telo andro sy telo alina" am-panajana aho hiverina kely hijery ny Soratra Masina dia hamaly ny hoe: Inona atao hoe ANDRO VOALOHANY FIHINANANA NY MOFO TSY MISY MASIRASIRA?
Rehefa voavalinareo araka ny lazain'ny Soratra Masina io dia mino aho fa ianareo ihany no hanitsy izay rehetra diso voalazanareo momba ny hoe TELO ANDRO SY TELO ALINA.
Ireto misy andinin-tSoratra Masina azonareo vakiana ho tari-dalana amin'ity dinika ity:
Eksodosy 12: 14-20
Marihana fa tsy ADY HEVITRA no tena tsara atao fa HADY HEVITRA satria iarahana mangady ny hevitra mba hahitana ny marina. Ny Ady Hevitra dia misy resy amin'ny farany. Ny hady hevitra kosa dia misy fahamarinana hita miaraka amin'ny farany.
Mahereza indrindra tompoko.
RBNIR - 11/05/2021 11:57
Ilay resaka paska fotsiny no mba tiako asiana resaka kely...
raka ny fampianara mivantana avy amin'i Jesosy...